ဒီတပါတ် သောကြာနေ့ အတွက်...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် E mail ကတဆင့် ပို့ ပေးလိုက်တဲ့
ချစ်စရာ ကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ပေးထားပါတယ်။
ဓါတ်ပုံများက ပြောသော ဇာတ်လမ်းပေါ့…။
ငှဲ.. ငှဲ.. ငှဲ... မှန်မှန်ပြော… ဒီနေ့ လခ ထုတ်လာတယ်မဟုတ်လား…
ပြလေ.. ပြလေ.. ပိုက်ဆံအိပ် ဘယ်မလဲ…???
အိုး… ဘာလို့ ပေးရမှာလဲ.. မပေးပါဘူး…
ဟာ.. အတင်းကို အနိုင်ကျင့်နေပါ့လား… ငိုပြီနော် ၀ါး.. ၀ါး.. ၀ါး..
အဟဲ.. ရပြီ.. ရပြီ… ခဏလေး Shopping သွားလိုက်အုံးမယ်နော်..
ကျေးဇူးဘဲ အချစ်ရေ… One Kiss…!!!
မှတ်ချက် ။ ။ ဓါတ်ပုံများ မျှဝေပေးသော သူငယ်ချင်းလေးကို ကျေးဇူး အကြီးကြီးတင်ပါတယ် နော်။
Posted by သက်ဝေ at 4:34 PM
တန်ခူး June 13, 2008 at 5:21 PM
ပြုံးဖြစ်အောင် စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါသက်ဝေရေ…Haveanice weekend.
mothonlay June 13, 2008 at 8:59 PM
အဟား အမောပြေတယ်ဗျ ချစ်စရာလေးတွေ... :)
nu-san June 14, 2008 at 10:44 PM
ရန်ကုန်မှာဆိုရင် သူများကလေးတွေမြင်ရင် ချစ်လွန်းလို့ ပိတ်ပြီး ဖက်နမ်းလိုက်တာပဲ။ အခုဒီမှာတော့ ကလေးတွေ မြင်ရင် လက်နဲ့တောင် မကိုင်ရဘူး..
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ သက်ဝေရေ... :)
myatnoe June 18, 2008 at 6:59 AM
ချစ်စရာလေးတွေနော် .. အမ..
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် June 19, 2008 at 8:14 PM
ချစ်စရာလေးတွေနော်.. ပုံလေးတွေနဲ့လိုက်အောင်ရေးတတ်လိုက်တာ.. :)
Layma June 20, 2008 at 10:21 PM
ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို အားကြီး အနိုင်ကျင့်တာပဲနော်..။
မောင်မျိုး June 23, 2008 at 4:39 PM
အစ်မလည်း ကျနော့်လို ပုံတွေနဲ့ဆားချက်တာပဲ ကောင်းတယ်ဗျ ချစ်စရာလေးတွေး)
သက်ဝေ June 27, 2008 at 1:16 PM
တန်ခူး.. မုတ်သုန်.. နုစံ.. မြတ်နိုး.. ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်.. လေးမ.. မောင်မျိုး..
ပုံလေးတွေကို ချစ်လို့ တင်ပေးထားတာ...
သက်ဝေလိုဘဲ ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာ..
မုတ်သုန်၊ ကိုရင်နော် နဲ့မောင်မျိုးရေ... အဲဒီလို အနိုင်ကျင့် မခံရအောင် သတိထားကြနော်.. ခွိ ခွိ
dilo bear July 2, 2008 at 9:22 AM